११ वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कुन बैंकले कति नाफा कमाए ? - Aarthiknews
११ वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कुन बैंकले कति नाफा कमाए ?
काठमाडौं । आइतबारसम्ममा ११ वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । दोस्रो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेका ११ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये, नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक, सिद्धार्थ बैंकको नाफा घटेको छ भने अन्य बैंकको नाफा सामान्य मात्रै बढेको छ ।
हेरौ, कुन बैंकले कति नाफा कमाए:
कुमारी बैैंकको नाफा २१.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्ममा ८० करोड ३० लाख नाफा गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा बैंकले ६६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
यो अवधिमा बैंकले ८० अर्ब ९२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ७३ अर्ब १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको थियो ।
बैंकसँग गत पुस मसान्तसम्म सर्वसाधारणको ८० अर्ब ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ७३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । कुमारीको निक्षेप र कर्जा करिब बराबर नै बढेको छ ।
बेंकले ५ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको छ भने ३ अर्ब ३७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी १ अर्ब ८२ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्ष कुमारीको खुद व्याज आम्दानी १ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थियो ।
बैंकको खराब कर्जा अनुपात १.०४ प्रतिशत छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा यस्तो अनुपात १.२२ प्रतिशत थियो । यस्तै, कष्ट अफ फण्ड ७.५० प्रतिशत छ । गत वर्ष ८.१२ प्रतिशत थियो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गत वर्ष ७८.०७ प्रतिशत थियो, यो वर्ष ७८.६१ प्रतिशत छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले ६ महिनामा ८२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा ७८ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले ६ महिनामा वितरण योग्य नाफा ६० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
बैंकले यो अवधीमा ९७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ८७ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सिडी रेसियो भने ७८.२७ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकले खुद ब्याज आम्दानी एक अर्ब ९८ करोड रुपैया पुर्याएको छ । ८ अर्ब ४५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकको कस्ट अफ फण्ड ७.६४ प्रतिशत छ भने आधार ब्याज दर १०.२६ प्रतिशत छ । स्प्रेड दर भने ५.२४ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल बैंकको मुनाफा १८।६ प्रतिशतले घटेको छ । पुष मसान्तसम्ममा बैंकले एक अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ६८ करोड ३७ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
समिक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप ८.९७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ९।२६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ८.६६ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५१ करोड रहेको छ भने रिजर्भमा ९ अर्ब रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा प्राइम कमर्सियल बैंकले एक अर्ब ३० करोड सात लाख ८७ हजार खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२।६१ प्रतिशतले बढेको हो । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ८६ करोड ५९ लाख ५९ हजार रहेको छ ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२।०३ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब १६ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकले एक अर्ब ८५ करोड ३८ लाख संचालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । पुष मसान्तसम्ममा नौ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ५१ हजार चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले जगेडा कोषमा तीन अर्ब १९ करोड ६७ लाख ३१ हजार राखेको छ । यो अवधिमा ८० अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकको बैंकको कर्जा लगानी ८० अर्ब ९१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।